Xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha umfanekiso weskrini Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Agasti 4, 2019 0 IiCententarios 1783
Ayikhe yenzeke kuwe ukuba ngamanye amaxesha uye ubone into enomdla ofuna ukubonisa omnye umntu? Olunye ukhetho olulula kakhulu lokugcina iiposti kunye neengxoxo zizikrini. Nangona kunjalo, kwakungeyonto imnandi ukuba ababhali bomxholo owukhethileyo bafumanise ukuba uyenzile. Umbuzo omkhulu ke,xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini? Siza kukucacisela apha ngezantsi.
Kuba akukho mntu uyimfihlo ukuba Instagram Ihlala ihlaziywa, izisa izixhobo kunye neempawu ezintsha eqongeni. Injalo, eyayikho ngonyaka we-2018 xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini okanye ii-skrini. Nangona kunjalo, kamva wasirhoxisa eso sigqibo kwaye wagqiba kwelokuba ayeke ukwazisa abasebenzisi xa umntu esenza i-skrini. Ke sukukhathazeka, akusekho lula ukuba wazi xa usenzile umxholo womxholo othile.
I-Instagram ilumkisa nini ukuba uthatha i-skrini?: Ii-skrini
Into ephambili kukwazi ukuba yintoni i-skrini okanye i-skrini. Ngaphandle kwamathandabuzo, ayisiyonto inzima ukuyiqonda namhlanje. I-skrini yimifanekiso okanye umfanekiso onokuthathwa kwi-smartphone okanye ikhompyuter. Kulo mfanekiso, unokujonga izinto ezithimbe umdla wakho, kunye nayo yonke into eyenza ifoto.
Ngokwesiqhelo, ii-skrini zisetyenziswa ukugcina iifoto okanye incoko ebalulekileyo kubasebenzisi. Nangona kunjalo, inento engalunganga, eyokuthi umgangatho womfanekiso uya kuba ngaphantsi kunefoto yasekuqaleni. Xa abasebenzisi benethiwekhi yoluntu bafumanise xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini, zazisetyenziswa kancinci. Nangona kunjalo, sele sisazi ukuba iqonga liphelisile eli nqaku.
Ngoku, ukususela ekuqaleni kwakungazange kwaziwa ngokuthe ngqo ukuba lo msebenzi mtsha we-Instagram wenziwa njani. Ngenxa yoku, abasebenzisi abaninzi bazibuza xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini. Inyani yile yokuba le nqaku intsha ayamkelwanga ngumntu wonke, yayisebenzela abanye abasebenzisi kuphela. Ngokungafaniyo nokucingwayo ngabantu bonke, xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini oku kusebenza kwi-Direct ngokukodwa. Oko kukuthi, eli nqaku lisebenza kuphela ukulumkisa ii-skrini ezenziwa kwimiyalezo yangasese.
Njengoko besitshilo, abasebenzisi abaninzi babonisa ukungoneliseki kukusebenza kwinethiwekhi yentlalo; nangona kunjalo, oku kwenzeke kuphela xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini. Ngoku, njengoko waziwa kakuhle, ngenxa yezikhalazo ezininzi ezibonisiweyo, u-Instagram uthathe isigqibo sokuwushenxisa lo msebenzi.
Unganomdla wokwazi: Uphi u-Direct ngokuthe ngqo?
Ungazithatha njani ii-skrini kwi-Instagram?
Into yokuqala ekufuneka uyikhumbule xa uthatha i-skrini okanye i-skrini, kukwazi ukuba loluphi uhlobo lweselula onayo; Kuxhomekeke kwimiyalelo ekuvumela ukuba uyenze. Ke ngoko, ngeli nqaku sijolise ukukubonisa yonke into oyifunayo malunga nesikrini kwizixhobo ezahlukeneyo.
Ngenxa yokunyuselwa okubangelwa kukuhlonitshwa xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini, abasebenzisi abaninzi bakhangele iindlela ezahlukeneyo zokuyenza ngaphandle kokuchongwa. Ngoku, nangona eli nqaku lalisele lisuswe yi-Instagram; Siza kukubonisa indlela yokwenza i-screenshots ngokwakho kwiizixhobo ezahlukeneyo.
Isikrini kwizixhobo ze-Android
Ukwenza i-screenshots kwizixhobo ze-Android, kuya kufuneka uthathele ingqalelo imodeli ye-smartphone onayo. Ngokusekwe koku, unokuqonda ukuba zeziphi izixhobo onokwenza skrini kwiselula yakho. Okulandelayo, siya kuchaza indlela yokusebenzisa ii-smartphones ezaziwayo ezisebenzisa le nkqubo yokusebenza:
Kwimeko yokuba unolu hlobo lwe-smartphone, kuya kufuneka uye kumandla kunye nevolumu phantsi amaqhosha; Bacinezele malunga nemizuzwana ye-3 kunye ne-voila! Uya kuba nayo i-skrini yakho.
Kule meko, ngezixhobo ze-HTC kuya kufuneka ukuba ukhethe iindlela zokunciphisa ivolumu kwaye ukhanyise isikrini ngendlela efanayo. Cinezela la maqhosha kwangaxeshanye ukufumana umfanekiso-skrini okanye skrini.
Ukuba ngokuchasene noko, une-smartphone evela kububanzi beSamsung; Kuya kufuneka ufumanise iqhosha lokuqala kunye neqhosha lamandla. Njengazo iifowuni ezininzi, kuya kufuneka uzicineze ngaxeshanye ukufumana umfanekiso-skrini. Kwimeko, ukuba kukho uqwalaselo lwendlela yokusebenza esebenzayo, ungathatha skrini ngokuhambisa ngasemva kwesandla sakho kwiscreen. Kwezinye izixhobo ezihambele phambili, cinezela iqhosha lamandla kwaye unciphise umthamo ngaxeshanye.
Kwimeko yezixhobo zeXperia, inkqubo iyatshintsha kancinci. Kwezi zixhobo, kuya kufuneka uzuze kwaye ubambe amandla ombane kwimizuzwana embalwa. Emva koko, iwindow pop-up iya kuvulwa ngeendlela ezininzi, khetha enye oza kuyithatha skrini kwaye yiyo!
Ngezi zixhobo, kuya kufuneka ufumane amandla kunye nevolumu ezantsi amaqhosha, ucinezele ngaxeshanye. Ngoku, ukuba unesixhobo esiqhubele phambili ngakumbi, uya kuba nenketho yokuqulunqa imiyalelo ngokwakho, ukufumana izikrini ngeli xesha ucinezela isikrini kabini ngamaphepha akho.
Isikrini kwizixhobo ze-iOS
Ngendlela efanayo, kanye njengoko kukho iindlela zokwenza i-screenshots ngenkqubo yokusebenza ye-Android, zikwakhona kuluhlu lwe-iOS kunye ne-iPhone. Ngoku, ukuthatha isikrini ngokusebenzisa isixhobo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo imodeli ye-smartphone onayo.
Kwimodeli zamva nje, kuya kwanela ukugcina amandla kunye namaqhosha evolumu acinezelwe imizuzwana eliqela. Nangona kunjalo, kwimeko yeemodeli ezisasebenzisa i "iqhosha lasekhaya" kuya kufuneka ucinezele lo myalelo, kunye neqhosha lamandla kwimizuzwana embalwa.
Ungazi njani ukuba ngubani owenza i-skrini kwi-Instagram?
Xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini, kukwenziwa ngesaziso ngemiyalezo yabucala. Ngoku, njengoko besesitshilo ngaphambili, i-Instagram yayeka ukukwazisa ukuba uthatha umfanekiso womxholo womnye umsebenzisi, okanye incoko. Oku kungenxa yesikhalazo esingenakubalwa esivelweyo xa kwavela lo msebenzi mtsha.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa le ndlela iphunyezwa liqonga le-Instagram ukwenzela ukukhusela ubumfihlo babasebenzisi bayo; Kwaphakama imbambano. Ngoku, olona lwazi lubalulekileyo, ngokusekwe kweli nqanaba litsha, bakhethe ukuthatha umfanekiso kwiikhompyuter zabo.
Kungenxa yoko le nto u-Instagram enze isigqibo sokusilela kolu hlaziyo lutsha kwaye ekugqibeleni walususa eqongeni. Ngale ndlela, abasebenzisi babo baya kwaneliseka ngakumbi kwaye baneliseke yimfihlo yomxholo wabo. Ngoku, ukuba yi-Instagram liqonga elihlala lihlaziywa, akufuneki kusimangalise ukuba inethiwekhi yoluntu isebenzise izinto ezintsha ezinxulumene nokukhusela ubumfihlo babasebenzisi bayo.
Iikrini ezivela kwikhompyuter: Musa ukushiya ngasemva!
Xa uyifunda, enye yeendlela ekunokukhethwa kuzo izikrini zemveli, kukuthatha isikrini kwikhompyuter. Le yindlela ekhawulezayo nelula, eya kukuvumela ukuba ugcine umfanekiso okanye nayiphi na imixholo oyijonga kwi-Instagram. Ukuphela kokungalungiseki koku kukuba imifanekiso iya kuba nomgangatho osezantsi.
Ngendlela efanayo, inokuqaqanjelwa ukuba iiWindows yenye yezona nkqubo zivulekileyo nezisebenzayo ngoku; Inezibonelelo ezininzi. Kunjalo, ukuba uyakufumana izixhobo ezininzi ezakuvumela ukuba wenze ikhomputha yakho ibe yeyakho, kunye nesoftware onokuyisebenzisa.
Amagqabantshintshi ngendlela elula!
Nokuba awukhange uqaphele, iicompyuter ezininzi zineqhosha elithile lokuthatha ii-skrini. Indawo yeqhosha elitshiweyo okanye iqhosha liya kuxhomekeka kubavelisi bolophawu. Nangona kunjalo, indawo ehlala kuyo ihlala kwikona ephezulu kwicala lekhompyuter.
Ukuze usebenzise olu khetho, kufuneka ucofe iqhosha elihambelanayo; Ihlala inegama elingu- "ImpPnt Pet Sis". Nje ukuba uyicinezele, umfanekiso-skrini uya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Ngoku, ukuyifumana, kufuneka uye kwimenyu "yezixhobo", faka "imifanekiso" kwaye ucofe "umfanekiso-skrini" ngokulandelelana.
Ngendlela efanayo, kwakhona kukho enye inqaku lokuxhasa olu khetho; Kwaye, ukuba ucofa kabini phezulu ungabona ukhetho oluya kukuvumela ukuba uhlele umfanekiso wakho. Phakathi kokukhethwa okunikezelwayo kukho: Chitha umfanekiso, yenza ividiyo ngokusekwe kuyo, uzobe kuyo, phakathi kwabanye.
Ngoku, ungasebenzisa ezinye iindlela zokuthatha isikrini kwikhompyuter yakho. Ungafezekisa oku ngokwandiswa kweGoogle Chrome, kunye nokusetyenziswa kwezihlanganisi eziphambili kwikhompyuter yakho.
Phakathi kokudityaniswa sifumana isitshixo seWindows ngokudibana ne-Impr Pant, ngayo ungayenza i-skrini kwaye uyigcine njengefayile. Ngendlela efanayo, uya kufumana ukudityaniswa kweqhosha le-Alt ngokudibeneyo kunye ne-Impr Pant kwaye oku kuya kukunika inketho yokwenza umfanekiso-skrini wewindow esebenzayo.
1 I-Instagram ilumkisa nini ukuba uthatha i-skrini?: Ii-skrini
2 Ungazithatha njani ii-skrini kwi-Instagram?
2.1 Isikrini kwizixhobo ze-Android
2.2 Isikrini kwizixhobo ze-iOS
3 Ungazi njani ukuba ngubani owenza i-skrini kwi-Instagram?
4 Iikrini ezivela kwikhompyuter: Musa ukushiya ngasemva!
4.1 Amagqabantshintshi ngendlela elula!
Le yeyona dolophu intle ehlabathini ngokutsho kwe-Instagram